Hevitra MPANOHARIANA | Janoary 2008 | 5
Nahatratra ny taona 2008: itantarako ianareo dia mba itantarao
2008-01-02 @ 07:50 in Andavanandro
Miarahaba anareo nahatratra ny taona 2008 ihany koa izany, hanome fanambinana anareo amin'ity taona vaovao ity anie Andriamanitra amin'ity taona diavintsika ity indray. Dia hotantaraiko anareo izany izay natao nanditra ny faran'ny taona sy ny andron'ny taombaovao e!
Vao marainan'ny 31 desambra dia efa nirotsaka madinidinika hatrany ny orana, tsy nahasakana ny olona teto Antananarivo tsy hiantsena izany toetr'andro izany noho ny fividianana ny kanokanona madinidinika. Dia tsy niomana ny hivoaka ny trano koa izahay tao an-trano fa heverina ho fandaniam-bola fotsiny izany fivoahana ny trano izany sady ny lalana rahateo petsapetsa mba tsy hilazana ny fotaka mety hitsahana handoto ny trano hidirana rahateo.
Dia tao an-trano izany no niandry ny ora hifampiarabana nahatratra ny taona e! Ny "karaoke" ihany no natao masaka ary tsy maintsy nandalo avokoa ny revin'ny sokajin'olona rehetra, hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny zaza madinika... ny an'ny ankizy moa izany dia ny hira amin'ny teny frantsay no natao fa ireny no mba hain'ny ankizy. Eo no tena ahatsapana ny fahabangan'ny fanolokoloana amin'ny alalan'ny hira malagasy ny ankizy. Na dia mpandala faratampony ny teny malagasy aza dia noleferina ny hambompo sady mety hisy fiovana filamatra rahateo amin'ity resaka fitenenana ity afaka kelikely any. Ny nahafinaritra dia tsy nisy nijery fahitalavitra (nihoatra ny ora iray) izany mihitsy tamin'io fotoana io, no sady tsy misy hojerena loatra koa ny ao. Ny sarin'ny filoha mikabary ihany no miverimberina nefa ny mpanomana ny kabariny koa angamba tsy dia mahay loatra fa nahamonaina be izany ny nanaraka ny teniny. Tsy naheno izany fisondrotana nolazainy izany no tsy ao anatin'ny vondron'asa iharan'ny fisondrotana ny tena. Impiry moa no nisy filazana izany fisondrotana izany fa ny anay tsy misy an'izany e! tsy miankina tsinona.
Rehefa nojeren'ny namana ihany koa ny fitsidihana ireny mpikarakara fety ireny dia nolazainy tamiko fa tsy dia betsaka ny olona tany. Heverina noho izany fa mety itovitovizana hataka ny anataonay avokoa ny nataon'ny ankamaroan'ny mponina teto Antananarivo. Mivory isam-pianakaviana dia manao izay hahametimety ny fetiny.
Dia mba tantarao hoe izay nataonareo?
«Mialoha 1 2 3 4 5